December 2016 - Ibsaa Jireenyaa
Dargaggeessa Karaan Jalaa Badee
December 30, 2016 Sammubani Leave a comment
Dhugumatti yeroo ammaa rakkoo fi fitnaa guddaa keessa jirra. Galaana fitnaa kana keessatti gosoonni namoota jalqaba nyaataman dargaggoota fi dubartoota. Dhugumatti dargaggoonni yeroo ammaa garam akka deeman malli harkaa bade, dukkanni jireenyaa isaan marse jira. Akkuma haati yoo ilma ofii dhabde raatoftu, dargaggoo fi shamarran ammaas kallattiin jireenya yommuu harkaa badu raata’aa jiru. Haati hanga daa’ima ofii argatutti hirriba gaarii ni raftii? Dargaggoon ammaas hirribaa gaarii ni rafu? Boqonnaa gaarii ni argatu? Sababni raata’u fi dukkana jireenya keessatti baduu maal ta’inna laata? Of gaafanne beeknaa? Maaliif jireenyi natti dukkanoofte jennee beeknaa? Read more
7.Fuudhuu ykn heerumu– osoo jaalalaan qabamuu baateyyuu fuudhaa heeruma keessa quufa, tasgabbii fi gammachuutu jira. Dubartii jaalalaan irraa qabamee fuudhu kan danda’u yoo ta’ee haa fuudhu. Kuni dawaa hundarra nama fayyaduudha. Fuudhaa heerumni jaalala daangaa darbee waan haaquf. Yoo fuudhun itti ulfaate karaa fuudhaa akka laaffisuuf gara Rabbii haa baqatu. Hanga fuudhu wanta Rabbiin dhowwe irraa obsaan haa fagaatu. Tarii hawwiin isaa ariifachuufi danda’a. Yookiin immoo namni inni jaallate sun isatti heerumu kan hin barbaanne yoo ta’e, haa obsu. Jabeenyaf Rabbiin haa kadhatu. Read more
December 17, 2016 Sammubani 5 comments
Akkuma dhukkuboonni baay’een dawaa qaban jaalallis dawaa qaba. Namni dhimma jaalalaa jabeesse fi keessaa bahuu ofitti ulfeesse, wanta hojjatuuf hin dhiifamu ykn osoo hin adabamin irra hin darbamu. Akkuma dhukkoobata birootiif dawaa (qoricha) barbaadatu, jaalalaafis dawaa barbaadatu qaba. Dawaan nama san kan fayyadu bakka fi yeroo sirriitti yoo fayyadamedha. Abbichi dawaa kana sirnaan yoo itti hin fayyadamiin jireenya ofii qisaasessaa jiraa jechuudha. Read more
December 10, 2016 Sammubani 8 comments
Wantoonni jaalala daangaa darbeetti nama geessan baay’eedha. Namni sababa yoo beeke miidhaa hojiin isaa itti fiddu irraa fagaata. Namni tokko jireenya keessatti milkaa’uuf sababa fi bu’aa wanta hojjatu beeku ykn tilmaamu qaba. Sababa (cause) jechuun hojiin sun akka raawwatamuuf wanta nama kakaasudha. Bu’aa (effect) yoo jennu immoo firii hojii san irraa argamuudha. Firiin sun miidha ykn faayda ta’uu danda’a. Kanniin sirritti yoo hin beekin jireenyi teenya gara hin qabdu. Read more
December 8, 2016 Sammubani 7 comments
Ni balleessaa diinummaa
Walitti hiidhaa obbolummaa
Ni fidaa tokkummaa
Ni qaraa sammuu doomaa
Hin jiru mi’aan akka imaana(x2) Read more
Akkuma waraanni lubbuu namaa galaafatu danda’u jaalallis yoo daangaa darbee qalbii fi lubbuu namaa galaafachu danda’a. Duraan dursinee hiikni jaalalaa maal akka ta’ee mee ilaallu. Jaalalli afaan ingiffaatin ‘Love’ yommuu jedhamu Afaan Arabiffaatin immoo Al-Hubb fi Al-ishq jedhamu. Afaan Arabiffaa hiika gaarii fi bal’aa jaalalaaf kenna. Beektoota armaan gadii wabii godhachuun hiika jaalala beekuf mee haa carraaqnu. Read more